Maxay yihiin Ciidamada uu cabsida ka muujiyay Madaxweyne Deni? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Maxay yihiin Ciidamada uu cabsida ka muujiyay Madaxweyne Deni?
Maxay yihiin Ciidamada uu cabsida ka muujiyay Madaxweyne Deni?
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland ayaa xalay Garowe ka jeediyay khudbad uu kaga hadlayay khilaafka siyaasadeed ee hareeyay Soomaaliya. Waxyaabaha uu sida gaarka ah uga hadlay waxaa kamid ahaa ciidamada dowladda Federaalka ee Haramcad iyo Gorgor, kuwaasi oo ku tilmaamay in ay khatar dhanka amniga ah u horseedeen dalka.
“Horta gorgorkaan la sheegayo aniga waxaan ku maqlay maalin la yiri Galmudug baa la keenay oo uu dagaal ka socday, Gedo in la geeyayna waan maqlay, halka ugu dambeeysay ee ay ka dagaalameena waxay aahyd Daljirka Daahsoon,” ayuu yiri Deni.
Deni oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in uu sameeyay baaritaan ku aaddan ciidamada Gorgor iyo Haramcad, waxa uuna ku tilmaamay in ay aad u tira baadan yihiin dabaabaadna wataan, hadduu tiradadooda uu sheegana “uu diidayo in uu Soomaalida ka nixiyo”.
“Nimankan sida loo tabaray aniga shaki weyn baa iga jira, marka wax naxariis ah oo ay leeyihiina ma jirto, dadka waxa xun looma sheego laakin waan qarsan waynay,” ayuu yiri isaga oo ka hadlaya ciidamadaas sida gaarka ah u tababaran.
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullahi Deni, ayaa sidoo kale hadal ka jeedintiisii xalay ku muujiyay in hadda uusan diyaar u ahayn ka qeybgalka shirkaas.
Haddaba Maxay yihiin Ciidamadan uu ka cabsida k muujiyay Madaxweyne Deni?
XIGASHADA SAWIRKA,BOOLISKA SOOMAALIYEED
Haramacad ayaa u badan rag dhallinyaro ah, waxaana taliye u ah nin da’ yar oo lagu magacaabo Farxan Maxamuud Qaroole oo ah dhallinyaro.
BBC-da ayaa isku dayday inay xiriir la sameyso mas’uuliyiinta dowladda, si ay uga jawaabaan dhaliilaha loo jeediyay ciidankan, hase yeeshee way ka gaabsadeen inay ka hadlaan
Previous articleMataanaha ku midoobay Dib u dhaca Muqdisho oo ka mideysan 9-qodob !! (Halkan ka Ogow).
Next articleJames Swan: “Soomaaliya waxay ku socotaa dariiq halis ah”oo u baahan in deg deg….
Akhriso: Cabdi Xaashi oo ka horyimid sharci uu si hoose u saxiixay MD Farmaajo
Diyaaradaha Mareykanka oo joogteyay duqeynta Gobolka Bakool.
Mahad Salaad oo weeraray xubnaha Hawiye ugu jira DF ee taageersan Farmaajo
Cumar Finish oo Xarigga ka jaray Maktabad loogu Magacdaray AUN Eng.Yariisow.
DEG DEG: Toogasho Goordhaw ka dhacday Muqdisho…
Askartii toogatay taliyihii ciidanka Gorgor oo dhamaan la xiray
Shacab iyo shabaab oo isu hor fadhiya deegaanka katirsan Galmudug lagana cabsi qabo dagaal labaad
“Boqortooyada Sacuudiga waxaa ku soo socda burbur weyn oo u baahan in si deg deg ah looga hortago”
Siyaasi Sheegay Qorshe Loogu Hortagi Karo Qaraxyada Al-Shabaab
Haweeneey gaarigeeda lix cisho go’doon ku gashay oo geeri ka badbaadday